Imidlalo ye-Epic ingqonge iingcali ezaziwayo kwityala layo nxamnye neApple | Ndisuka mac
Kule mpi ye Imidlalo ye-Epic ngokuchasene neApple, Siyayibona inkqubela yazo zombini iinkampani ngokubhekisele kwisikhalazo esifakwe macala. Ngoku siyazi ukuba abaphuhlisi bomdlalo wevidiyo bazirhangqile ngeengcali ezaziwayo ukuze bakwazi ukuphelisa iimpikiswano zenkampani yeapile kwaye ke bakwazi ukuphumelela umlo. Kusele inyanga enye de kuxoxwe ityala kwaye sikwi fQiniseka ukuba unikezela ubungqina.
I-Epic ivelise iingxoxo ze iingcali ezivela kwizifundiswa ezahlukeneyo ezivela kwiiyunivesithi ezidumileyo, njengoko esenza ityala lakhe lokuchasana neApple. Ngokukodwa, iingcali zilichithile ibango lika-Apple lokuba eyona ndima iphambili yeVenkile ye-App kukukhusela abasebenzisi. Babanga ukuba ukhuseleko lweapps sisizathu nje sokuthintela iivenkile ezikhuphisanayo zeapp; ukusikwa kweApple kunciphisa ukuthengiswa kweapp. Kananjalo iApple inika ezayo izicelo ithuba elingalunganga ... njl.
El UGqirha David Evans osuka kwiYunivesithi yaseLondon (UCL) ithe:
Abasebenzisi be-Apple kunye ne-Android batyala imali kwizixhobo zeekhompyuter, kwisoftware, kunye nasekufundeni kwendalo yabo. Isigqibo sokutshintsha iinkqubo zokusebenza sisigqibo sokuhambisa indalo, oko kuthetha ukuba abathengi bazakuphulukana nexabiso lolu tyalo mali kwaye kuya kufuneka benze ezintsha. Ezi ndleko banciphisa inkuthazo yabathengi ukuba batshintshe.
Into ayithethayo kukuba, ukuba sinesicelo kunye nenkqubo yomdlalo kwi-Android, xa sifudukela eApple, kuya kufuneka sihlawule kwakhona ngento esele sinayo, hlawula kabini ngokufanayo ..
UNjingalwazi wezoQoqosho kweStanford USusan athey ixhase le ngxoxo ingentla kwaye yongeze ukuba ibango lika-Apple lokuba iVenkile ye-App enye ayisiyonyani Kuyimfuneko ukuqinisekisa ukhuseleko:
I-Apple iyazibaxa ikakhulu izibonelelo zokhuselo zemodeli yazo yeVenkile yeApple. I-Apple iyagwetyelwa ukukhathazeka ngokhuseleko lwabasebenzisi bayo. Isiqinisekiso sokhuseleko se-iPhone sinyanzeliswa ikakhulu yinkqubo yokusebenza. Hayi ngenxa yeVenkile yeApple yeApple kunye nenkqubo yokujonga kwakhona.
Ngokusengqiqweni kunjalo iingcali eziqeshwe yimidlalo ye-Epic kwaye yonke into iyakusonjululwa kulingo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Imidlalo ye-Epic ingqonge iingcali ezaziwayo kwityala layo nxamnye neApple